कपालको बृद्धिका लागि Pro सिद्ध घरेलु उपचार - कपाल
कपालको बृद्धिका लागि Pro सिद्ध घरेलु उपचार
जसरी तपाईंको छालालाई हेरचाह र पोषण चाहिन्छ, त्यसरी नै तपाईंको पहिरनमा पनि तपाईंको मायालु ध्यान दिन आवश्यक छ। आधारभूत कपाल हेरचाह नियमित सुनिश्चित गर्नमा लामो यात्रा गर्न सक्छ स्वस्थ कपाल । रसायनिक उत्पादनहरूमा अत्यधिक निर्भरता विरुद्ध विज्ञहरू सतर्क छन्, जब यो एक मजबूत कपाल हेरचाह योजना बाहिरको कुरा आउँछ। यसको सट्टामा, प्राकृतिक उपचारहरू खोज्नुहोस् - वास्तवमा, तपाईंले आफ्नै घरमा केश समाधानहरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँ धेरै सामग्रीहरू छन्, जुन तपाईको किचनमा सजिलैसँग उपलब्ध हुन्छन्, जसले कपाल झर्ने, डन्ड्रफ र स्क्याल्प इन्फेक्सनसँग लड्न सक्छ। यहाँ केहि सबैभन्दा प्रभावकारी छन् कपालको विकासको लागि घरेलु उपचार त्यो तपाईंको कपाल को लागी उपयोगी हुन सक्छ।
१ आँवला मद्दतले कसरी केशको बृद्धिका लागि घरेलु उपचार?
दुई के आवश्यक तेलको सहायताले कपालको विकासको घरेलु उपचार गर्न सकिन्छ?
3 नरिवल उपचार संग कपाल विकास को लागी उत्तम घर उपचार के हो
चार क्यास्टर तेलको साथ कपालको विकासको लागि घरेलु उपचार केश समस्याहरू रोक्छ?
।। के हामी शिकाकाई र रीथाको साथ कपालको विकासको घरेलु उपचारमा भर पर्न सक्छौं?
। केश बढ्नका लागि घरेलु उपचारका फाइदाहरू के के हुन्?
।। कसरी कपाल विकास को लागी घरेलु उपचार एप्पल साइडर सिरका मद्दत गर्न सक्छन्?
।। अण्डाको मास्कको साथ कपालको बृद्धिको लागि हामी कसरी घरेलू उपचारहरू बनाउन सक्छौं?
9 प्रायः सोधिने प्रश्नहरू: कपालको बृद्धिका लागि घरेलु उपचार
यहाँ क्षतिग्रस्त कपालको लागि दुईवटा घरेलु उपचारहरू, आमला तारांकित छन्।
कसरी घरमा कपाल झर्ने प्राकृतिक रूपमा कम गर्न
कटोरामा, २ चम्मचको मिक्स गर्नुहोस् आंवला पाउडर र २ चम्मच सिक्काइ पाउडर र अलि अलि धेरै पानी मिठो पेस्ट बनाउनको लागि। यसलाई पानी नदिनुहोस्। तपाईंको स्क्याल्प र कपालमा मिक्स लागू गर्नुहोस् र 45 45 मिनेट जति कुर्नुहोस्। यस पछि, सामान्य पानीमा तपाईंको कपाल शैम्पू गर्नुहोस्। तपाईं हप्तामा एक पटक यो तालिका अनुसरण गर्न सक्नुहुन्छ।
तातो २ चम्मच नरिवलको तेल यो खैरो बन्न सम्म। आंवला पाउडरको चम्चा थप्नुहोस् र मिश्रण अलि चिसो हुन दिनुहोस्। तपाईंको टाउकोको मालिश गर्नुहोस् यसका बारे १० मिनेट को लागी र आधा घण्टा वा बढी प्रतीक्षा गर्नुहोस्। शैम्पू बन्द छ। हल्का शैम्पू प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईं हप्तामा दुई पटक यो तालिका अनुसरण गर्न सक्नुहुन्छ।
आमलाले कसरी काम गर्दछ : यो एक प्राकृतिक प्रतिरक्षा बूस्टर मानिन्छ। वास्तवमा विज्ञहरू भन्छन कि यो कपालको जीवनशैलीको लागि सब भन्दा खोजिने प्राकृतिक घटक हो। किन? यसको कारण यो हो कि आंवलामा अत्यावश्यक फ्याटी एसिडहरूको अडल हुन्छन्, जसलाई कपालको फोलिकल्स मजबूत पार्न भनिन्छ। साथै, आंवलामा भिटामिन सीको बृद्धिले समयपूर्व बगैंचा रोक्न सक्छ। यो फलाम र शक्तिशाली एन्टिआक्सिडन्ट्समा पनि उच्च छ - एल्याजिक, गेलिक एसिड र क्यारोटीन। पछिल्लोले टाउकोको वरिपरि रगत प्रवाहलाई सुधार गर्दछ जसले कपालको बृद्धिलाई उत्तेजित गर्दछ। के अधिक छ, यी पनि गर्न सक्नुहुन्छ डन्ड्रफसँग लड्नुहोस् ।
२. कपालको वृद्धिको लागि घरेलु उपचारहरू आवश्यक तेलको सहयोगमा गर्न सकिन्छ?
तपाइँको कपाल समस्याहरूका लागि घरेलु उपचार आवश्यक तेल समावेश गर्नु पर्छ। यहाँ केहि प्रजातिहरू छन् जुन कपालको लागि उनीहरूको जादुई लाभहरूको लागि फीड हुन्छन्।
रोजमेरी र लैभेंडर
२ चम्मच जैतुनको तेल तातो र तेलमा आधा टुक्रा एवोकाडो थप्नुहोस्। तिनीहरूलाई whisk। अलि अलि मह र अण्डाहरू थप्नुहोस्। ब्लेन्ड रोजमेरी र ल्याभेडर तेलहरू थप्नुहोस् - प्रत्येक १० ड्रपहरू। तपाईंको स्क्याल्प र कपालमा मिक्स लागू गर्नुहोस् र minutes 45 मिनेट कुर्नुहोस्। शैम्पू बन्द छ। हप्तामा एक पटक यो प्रयास गर्नुहोस्।
कसरी रोजमेरी र ल्याभेन्डर कार्य: रोजमेरीमा कार्टोसोल भनिने एक एंटी-इन्फ्लेमेटरी एजेन्ट हुन्छ - यो एकदम शक्तिशाली तत्व हो जसले हर्मोनहरूलाई सन्तुलनमा राख्न सहयोग गर्दछ। यसले फोलिकल विकासलाई बढावा दिन सक्छ, जसले कपाल खस्ने सम्भावनालाई कम गर्दछ। ल्याभेन्डरमा रहेको लिनलूल र लिनाइल एसीटेटले कपालको जरालाई सुदृढ पार्न र फोलिकल्सलाई उत्तेजित गर्न मद्दत गर्दछ, जसले कपालको बृद्धिलाई बढावा दिन्छ।
यदि तपाईंसँग खुजलीको छाला छ भने, jojoba तेल मालिश गर्न भारी मद्दत गर्न सक्दछ। यसले रक्त संचारमा पनि मद्दत गर्दछ।
तपाईं jojoba एक घर-निर्मित कन्डिसनरको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यसलाई शैम्पू गरे पछि कपालको अन्तमा लागू गर्नुहोस्।
अण्डको जर्दी, एक चम्मच जोजोबा तेल, एक चिया चम्चा मह र केही थोपा निम्बूको रस ब्लेन्ड गर्नुहोस्। तपाईंको स्क्याल्प र कपालमा मिक्स लागू गर्नुहोस् र 45 45 मिनेट जति कुर्नुहोस्। त्यस पछि, शैम्पू बन्द।
Jojoba कसरी काम गर्दछ : यो एक सुखद emollient मानिन्छ। र यो प्राय: सुक्खा कपालको लागि प्रभावकारी छोड्ने उपचारको रूपमा स्वागत गरिन्छ। यो एन्टी-फंगल गुणहरूमा पनि धनी छ जुन टाल्कोलाई स्वास्थ्यको गुलाबीमा राख्नका लागि महत्त्वपूर्ण छ। जोोजोबाले तपाईको छालाको मृत छालाको चिलाउने तहहरूबाट छुटकारा पाउन मद्दत गर्दछ - यसले तपाईको रूसी र फोहरबाट पनि छुटकारा पाउन सक्छ, सफा खोपडीको पछाडि। जोजोबा भिटामिन ई, ओमेगा and र fat वसायुक्त एसिड र एक संतृप्त फ्याट्टी एसिडमा पनि धनी छ जसले हानि पुर्‍याउने हानिकारक फ्रि रेडिकलहरूसँग लड्दछ जसले हाम्रो कपाललाई क्षति पुर्‍यायो। जोजोबा कपालको तेलले कपालको फोलिकल्सलाई प्रभावकारी रूपमा अनब्लक गर्न सक्दछ।
जुनिपर तेल डन्ड्रफको लागि घरेलु उपचार हुन सक्छ। केवल बदामको तेलको अलिकतामा जनिपर आवश्यक तेलको -5- drops ड्रप थप्नुहोस् र तपाईंको स्क्याल्पमा मिश्रण लागू गर्नुहोस्। मसाज कम्तिमा केही हप्ता को लागि यस प्रक्रिया नियमित गर्नुहोस्।
जुनिपरले कसरी काम गर्दछ : जुनिपर तेलले कसैसँग सम्पत्ती प्राप्त गरेको छ। जुनिपर तेलले कपालको जरा बलियो बनाउन सक्छ जसले कपालको बृद्धिलाई बढावा दिन्छ। यदि तपाईं स्क्याल्पमा जुनिपर तेल लागू गर्नुहुन्छ भने, तपाईं खोपडीमा एक्ने ब्रेकआउट्स रोक्न सक्नुहुन्छ। यो किनभने अत्यावश्यक तेलको एन्टिसेप्टिक गुणले स्क्याल्पमा एक्ने-पैदा गर्ने ब्याक्टेरियाको विकासलाई रोक्दछ। यसले फोलिकल्स भित्र फोहोर जमाउन रोक्छ जसले गर्दा एक्ने ब्रेकआउट्सलाई रोक्दछ।
C. नरिवल उपचार संग कपाल विकास को लागी उत्तम घर उपचार के हो
पुस्ताहरूका माध्यमबाट, नरिवल तेल कपाल समस्याहरूका लागि एक जादुई घरेलु उपचारको रूपमा पूजा गरिएको छ।
२ चम्मच नरिवलको तेलमा तताउनुहोस्, आधा निम्बूको रस र महको एक चम्मच। राम्रोसँग मिक्स गर्नुहोस् र मा लागू गर्नुहोस् कपाल र टाउकोको छाला । एक घण्टा वा धेरै समयसम्म पर्खनुहोस् र यसलाई सल्फेट-फ्री शैम्पूले धुनुहोस्। यसले तपाईलाई मद्दत गर्न सक्छ डन्ड्रफबाट छुटकारा पाउनुहोस् ।
नरिवल तेल र एक पाकेको केरा सँगै ब्लेन्ड गर्नुहोस्। थोरै थप्नुहोस् नरिवलको दुध मिश्रण गर्न। कपाल र टाउकोमा लागू गर्नुहोस्। मिश्रण केहि समयको लागि आराम गर्न दिनुहोस् र त्यसपछि शैम्पू बन्द गर्नुहोस्। यो राम्रो एन्टि-हेयर फल उपचार हो।
एक अण्डा र नरिवल तेल मा मह एक चम्मच whisk। कपाल र टाउकोमा मालिश गर्नुहोस्। अधिकतम लाभको लागि केहि घण्टा कुर्नुहोस्। सामान्य जस्तो शैम्पू। यो बिग्रिएको कपाल / को लागी एक राम्रो घरेलू उपचार हो
नरिवल तेल बदाम तेल, आर्गन तेल र दही को एक बड़ा चम्मच मिक्स। यो मास्क राम्रो रूपमा तपाईंको कपाल र टाउकोमा लगाउनुहोस् र यसलाई रातभर राख्नुहोस्। अर्को दिन यसलाई श्याम्पू गर्नुहोस्। यो दिनचर्याले सुस्त कपालमा चमक थप्न सक्छ।
नरिवल तेलले कसरी मद्दत गर्दछ : त्यहाँ थुप्रै कारणहरू छन् जुन मानिसहरूले युगौंयुगमा नरिवलमा प्यान्स गाए। मध्यम चेन फैटी एसिड र लौरीक र क्याप्रिक एसिडले नारियलमा समृद्ध एन्टिमाइक्रोबियल र एन्टि-फंगल गुणहरू सुनिश्चित गर्दछ र यी मुख्य रूपमा फ्रि रेडिकलहरूलाई स्टन्टिंग कपालको बृद्धिबाट रोक्नको लागि आवश्यक छ। नरिवल तेलले पनि चम्किलो र गाढा कपाल सुनिश्चित गर्दछ।
डन्ड्रफको लागि घरेलु उपचार
कसरी प्राकृतिक रूपमा कपाल झर्ने नियन्त्रण गर्न
Cast. क्यास्टर तेलको साथ कपालको वृद्धिको लागि घरेलु उपचारले केश समस्याहरूलाई रोक्दछ?
Table चम्मच क्यास्टर तेल र नरिवलको तेलमा एक चम्मच मेथी दाना थप्नुहोस्। मिश्रण थोरै खैरो बन्ने र फोम सुरु नभएसम्म तताउनुहोस्। यसलाई शान्त गर्नुहोस् र तपाईंको स्क्याल्प र कपालमा मालिश गर्नुहोस्। करीव minutes 45 मिनेट को लागी कुर्नुहोस् र यसलाई धुनुहोस्। अधिकतम लाभका लागि हप्तामा कम्तिमा दुई पटक यो मिश्रण लागू गर्नुहोस्।
यदि तपाईंसँग वास्तवमै सुस्त कपाल छ भने, यो मास्क तपाईंको लागि सही प्रकारको घरेलु उपचार हो। Te चम्मच क्यास्टर तेल र २ चम्मच सरसोंको तेल लिनुहोस्, जुन हाम्रो भान्छामा सामान्य छ। राम्रोसँग मिक्स गर्नुहोस् र तपाईंको स्क्याल्प र कपालमा करीव १० मिनेटको लागि मालिश गर्नुहोस्। केही समय पछि यसलाई श्याम्पू गर्नुहोस्।
एन्डरको तेलले कसरी काम गर्दछ : यो परम्परागत रूपमा बिग्रिएको टाउकोको छाला र कपाल झर्ने उपचारको लागि प्रयोग गरिएको छ। क्यास्टरल तेल प्रोटीन, खनिज र भिटामिन ई मा समृद्ध छ र यसैले यो तपाइँको कपाल को लागी एक जादू औषधि को रूप मा काम गर्दछ। यसबाहेक, क्यास्टर तेलमा रिकिनोलिक एसिड र ओमेगा essential अत्यावश्यक फ्याटी एसिडहरू छन् जसले टाउकोको छालामा रक्त संचार बढाउँदछ, जसले कपालको बृद्धि बढाउँदछ। क्यास्टरल तेल पनि विभाजन समाप्त समाप्त गर्न को लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ।
Hair केश झर्नेको लागि घरेलु उपचार
We. के हामी शिकुकाई र रीथाको साथ कपालको विकासको घरेलु उपचारमा भर पर्न सक्छौं?
तपाईं पोकालाई घाममा सुकाएर केही दिनको लागि घरमा शिकाकाई पाउडर बनाउन सक्नुहुन्छ र यसलाई मिक्सरमा पिसाएर। यस पाउडरको लगभग २ चम्मच लिनुहोस् र यसलाई नरिवल तेलको जारमा थप्नुहोस्। कन्टेनर भण्डारन गर्नुहोस् कोठा, अन्धकार ठाउँमा करीव १ days दिनको लागि। प्रयोग गर्नु अघि हल्लाउनुहोस्। कम्तिमा हप्तामा दुई पटक तपाईको टाउकोको मालिस गर्न यसको प्रयोग गर्नुहोस्।
कपाल झर्नु रोक्न के गर्ने
कसरी shikakai काम गर्दछ : यो कपालका सबै प्रकारका समस्याहरूको लागि अत्यन्त प्रभावकारी घरेलु उपचार मानिन्छ। यसको शानदार कपाल सफा गर्ने गुणहरूको कारण, यसलाई प्रायः शैम्पूको प्राकृतिक विकल्प मानिन्छ। यो एन्टीआक्सीडन्ट र भिटामिन ए, सी, के, र डी मा समृद्ध छ, जसले कपाललाई पोषित राख्न सक्छ।
रीठा (साबुनट) संग कुल्ला
साबुनट र सिककाइ पोइन्ट्सको केहि टुक्राहरू लिनुहोस्। तिनीहरूलाई liters०० लिटर पानीमा उमाल्नुहोस्। रातभर मिश्रण छोड्नुहोस्। मिश्रण तान्नुहोस् र यसलाई शैम्पूको रूपमा प्रयोग गर्नुहोस्। असंख्य लाभहरूमा नियमित रूपमा र चमत्कार प्रयोग गर्नुहोस्।
कसरी रीथा काम गर्दछ : रीठा saponin, कि तपाइँको कपाल स्वस्थ राख्न को लागी जिम्मेदार छ।
Hair. केशको लागि एलोवेराको साथ कपाल बढ्नका लागि घरेलु उपचारका फाइदाहरू के हुन्?
यदि तपाईं चिल्लो केश छ, एलोवेरा एक उद्धारकर्ता हुन सक्छ। Drops बूँदें निम्बूको रस र २ बूँचा चिया रूखको तेल थप्नुहोस् र तिनीहरूलाई te चम्मचसँग मिलाउनुहोस् एलोवेरा जेल । औंलाको टिप्सको प्रयोग गरेर तपाईको टाउको मालिश गर्नुहोस्। यस कपाललाई तपाईंको कपाल कभर गर्नुहोस् र 30० मिनेटसम्म यसलाई रहन दिनुहोस्। शैम्पू बन्द, कन्डिशनर पनि प्रयोग गर्नुहोस्। चिया रूखको तेल टाउकोको संक्रमणको बिरूद्ध कार्य गर्न सक्छ।
२ टेबल स्पून मेथी दाना रातभरि पानीमा भिजाउनुहोस्। नरम बीउ ब्लेन्ड गर्नुहोस् महीन पेस्टको रूपमा। यो table चम्मच एलो भेरा जेल मिलाउनुहोस्। यसलाई कपालको मास्कको रूपमा प्रयोग गर्नुहोस् र 45 45 मिनेटसम्म यसलाई राख्नुहोस्। शैम्पू बन्द छ। यो राम्रो एन्टि-हेयर फसल मास्क हुन सक्छ।
एलोवेराले कसरी काम गर्छ: एलोवेराले हाम्रो छाला र कपालका लागि असंख्य लाभहरू गर्दछन् यसको मुख्य सामग्रीको कारण। यो फ्याट एसिड, भिटामिन, आवश्यक एमिनो एसिड र जस्ता र तामा जस्ता खनिजहरूमा समृद्ध छ जुन कपालको बृद्धिलाई बढावा दिन चिनिन्छ।
Hair. कसरी कपाल विकासका लागि घरेलु उपचार एप्पल साइडर भोइनगरले मद्दत गर्न सक्दछ?
यो मास्कले तपाईंको ट्रेस र स्काल्पमा तेल नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्दछ। आधा कप एप्पल साइडर सिरका को एक लिम्बू को grated छीलो संग जोड्नुहोस्। तपाईंको स्क्याल्पमा लागू गर्नुहोस् र २० मिनेटको लागि यसमा छोड्नुहोस्। यसले मिक्सलाई तपाईंको टाउकोबाट थप तेल लिन मद्दत गर्दछ। पानी संग कुल्ला।
बिस्तारै ACV फुलरको पृथ्वीको आधा कपको लागि थप्नुहोस्। बाक्लो पेस्ट बनाउनुहोस्। केही बूँदें निम्बूको रस थप्नुहोस् र राम्रोसँग मिक्स गर्नुहोस्। यस मास्कले तपाईंको कपाल पूर्ण रूपमा छोप्नुहोस्। तपाईं पानी संग कुल्ला गर्न सक्नुहुन्छ वा तपाईं यसलाई शैम्पू बन्द गर्न सक्नुहुन्छ।
कसरी ACV काम गर्दछ : यो मजबूत र बाउन्सीयर कपाल को लागी सही सामग्री छ - भिटामिन सी, भिटामिन बी र एसिटिक एसिड। भिटामिन सी हानिकारक नि: शुल्क रेडिकल र डन्ड्रफसँग लड्नका लागि परिचित छ। भिटामिन बी ले चिकनी रक्त संचारमा मद्दत गर्न सक्छ। एसिटिक एसिडले हानिकारक रसायन, कीटाणु र ब्याक्टेरियाको कपाललाई हटाउन मद्दत गर्दछ।
Eg. हामी कसरी अण्डको मास्कको साथ कपालको विकासको लागि घरेलू उपचारहरू बनाउन सक्छौं?
तपाईं केवल अण्डाहरू र दहीको साथ एक शानदार कपाल कन्डिशनर बनाउन सक्नुहुन्छ। २ अण्डाहरू र २ चम्मच ताजा दही (केवल फिलाभोर गरिएका प्रजातिहरू) लिनुहोस् एउटा पेस्ट बनाउन। यसलाई कपालको मास्कको रूपमा प्रयोग गर्नुहोस्, र कम्तिमा 30० मिनेट कुर्नुहोस्। शैम्पू बन्द छ।
यो एक केहि जस्तो तपाइँको कपाल पोषण गर्न सक्नुहुन्छ। २ अण्डाहरू, महको १ चम्मच र २ चम्मच दूध लिनुहोस्। राम्रोसँग मिक्स गर्नुहोस्। यो संग आफ्नो कपाल कभर। Minutes० मिनेट प्रतिक्षा गर्नुहोस् र त्यसपछि शैम्पूको साथ कुल्ला।
अण्डाहरूले कसरी काम गर्दछन्: केश 70० प्रतिशत केराटीन प्रोटीन मिलेर बनेको छ, अण्डाहरू क्षतिग्रस्त र सुक्खा कपाललाई पुन: निर्माण गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ यसलाई सहज र मोइस्चराइज बनाएर। अण्डाहरू सबै कपाल प्रकारहरूका लागि राम्रो हुन्छन्। यी केवल कपाल पौष्टिकको लागि उपयुक्त छन्। वास्तवमा, कपालको लागि तपाईंको घरेलु उपचारमा अण्डाहरू समावेश गर्नुपर्दछ।
प्रायः सोधिने प्रश्नहरू: कपालको बृद्धिका लागि घरेलु उपचार
Q. के तेल एक घर उपचार को रूप मा एकदम आवश्यक छ?
TO हो, यो छ। तेल निश्चय नै तपाईंको कपाल हेरचाहको तालिकाको आधारभूत घटक हो। तेलले कपाल शाफ्टमा प्रवेश गर्न सक्दछ यसैले हाइड्रेशन प्रदान गर्न र कपाललाई क्षति रोक्नबाट। तर सावधानीको कुरा: केहि उत्पादनहरू जस्तै नारियलको तेलमा अन्तर्निहित गुणहरू हुन्छन् र यदि लामो समयसम्म छोडियो भने यसले नमीमा लक गर्न सक्दछ र थप ब्रेकआउटहरू निम्त्याउन सक्छ। यो पनि संवेदनशील छाला को लागी एलर्जी प्रतिक्रिया ट्रिगर गर्न सक्दछ। यद्यपि एक कपाल पेशेवरसँग परामर्श गरेपछि, आधारभूत तेल दिनदिनै विवेकीपूर्वक अनुसरण गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि, तातो तेल मालिश , यदि एक उचित तरीकाले गरियो भने, चमत्कार गर्न सक्छ। तातो तेलको मसाज चिसो तेलको मसाज भन्दा बढी फाइदाजनक भनिन्छ किनकि गर्मीले रक्त संचारलाई सजिलो बनाउँदछ, जसले कपालको फोलिकुलहरूमा पोषक आपूर्ति बढाउँदछ। न्यानो हुँदा कपालले तेल पनि राम्रोसँग समाहित गर्दछ। अत्यधिक तातो नगर्नुहोस् किनकि यसले पौष्टिक तत्त्वहरूलाई नष्ट गर्न सक्छ। तपाईको कपाललाई अन्धाधुन्ध तेल लगाउन शुरू नगर्नुहोस्, विशेष गरी यदि तपाईसँग तेल भएको छ भने। पहिले नै केश विज्ञको परामर्श लिनुहोस्।
Q. कपाल को विकास को लागी सबै भन्दा राम्रो खाना के हो?
प्रापक: घरेलु उपचारका रूपमा कपालको मास्क प्रयोग गर्नु ठीक छ, तर तपाईले आन्तरिक रूपमा पनि कपालको क्षति विरुद्ध लड्नै पर्छ। तपाईंको कपाल हेरचाह दिनचर्या अपूर्ण छ यदि तपाईंको खानाले तपाईंको कपालको स्वास्थ्यको लागि आवश्यक खाद्य पदार्थहरू समावेश गर्दैन। उदाहरणका लागि केहि पोषकहरू जस्तै प्रोटीन, भिटामिन बी १२, बायोटिन, ओमेगा fat फ्याट्टी एसिड, फलाम र भिटामिन ई कपालको विकासलाई बढावा दिन राम्रो हुन्छ। त्यसो भए, पहिले एक डाईटियनसँग परामर्श लिनुहोस् र त्यसपछि अण्डाहरू (प्रोटिन र बायोटिन), पातदार तरकारीहरू (फलाम), नट र बीउ (ओमेगा fat फ्याट्टी एसिड), एवोकैडो (भिटामिन ई) र सम्पूर्ण अन्न र मासु (भिटामिन बी) समावेश गर्ने डाईटको लागि छनौट गर्नुहोस्। )। अवश्य पनि यो कपालको विकासका लागि उत्तम खाद्य पदार्थहरूको पूर्ण सूची होइन। अधिक विकल्पहरूको लागि डाईटियनसँग परामर्श लिनुहोस्। प्रोटीन, बायोटिन, भिटामिन बी, भिटामिन बी १२ र भिटामिन ई धनी खाद्य पदार्थ लिनुहोस्।
दैनिक व्यायाम पेट को बोसो कम गर्न
कपाल झर्नु रोक्नको लागि घरेलु उपचार
व्यायाम पेट चर्बी कम गर्न
स्वस्थ कपाल विकासको लागि सुझावहरू
कसरी कपाल झर्ने र ड्यान्ड्रफ प्राकृतिक रूपमा नियन्त्रण गर्ने